अछुतकाे पिंजडा – Kite Sansar
मानिस ठुलाे दिलले हुन्छ,जातले हुदैन । ( महाकवि लक्ष्मिप्रसाद देवकाेटा )
मानव जातिकाे बास बस्ने छानाे पृथ्बि हाे । पृथ्बिमा मानव जाति लगायत सम्पुर्ण साना ठुला प्राणिहरुले बास स्थानकाे रुपमा बास बस्ने गरेकाे पाईन्छ । यहाँ सजिबहरु मात्र हाेईन ढुङ्गा, माटाे, काठ, लगायतका नर्जिवहरुले पनि पुथ्बिकाे साैन्दर्यताकाे राैनक बढाएका छन । पुथ्बिमा रहेका हरेक सजिव प्राणिहरु मध्ये खान, बस्न र एक ठाउँ देखि अर्काे ठाउँ सम्म जाने प्राणि त सबै हुन तर त्यति मध्य मानिसलाई चेतनशिल प्राणिकाे रुपमा बर्गिकरण गरीएकाे छ । किन भने सबै सजिवहरुमा राम्राे नराम्राे सब्रिने बिग्रिने चेतना हुदैन । अाज बिश्वमा जे जति तथ्यहरु भए कम छन ति सबै मानव जाति बाट नै सम्भब भएकाेले गर्दा र मानिसमा चेतना भएकाले मानिसलाई चेतनशिल प्राणि भनिएकाे हाे ।
अाजकाे बिश्व अाजकाे समाज एक्काईसाै सताप्दीकाे जनमासले मानिसबाट सबै सम्भब छ भन्दा बिश्वास गर्ने, अाज सम्म जे जति भएका छन मानिसले गरेरै सम्भब भएका हुन भन्दा बिश्वास गर्छन । तर पुस्ताै पुस्ता देखि मान्छे सबैकाे रगत राताे हुन्छ । सबै मानब जातिकाे उत्पति पनि पुथ्बिमा भएकाे भन्दा नपत्याउने मानिसकाे जन्म पनि पुथ्बिमा भएकाे हाे । जन्मदै काेहि दलित हुदैन, न काेहि बाहुन न काेहि क्षेत्रि भन्ने बिचार बिरलैमा छ । हुन त अाजकाे बिश्वमा जात बिजात देबि देवता मठ मन्दिर यि सबै अन्धबिश्वास हाे भन्ने अभियानताहरु त अाज बिश्वासका पात्र भएका छन हाम्राे देशमा ! काेहि अछुत थियनन । काेहि ठुला काेहि साना र काेहि घृणित थियनन सबै समान भएपछि मानिसले मानिसलाई शाेषण गर्नका लागि तत्कालिन बाईसे चाैबिसे राज्यका राजा जयस्थिति मल्लले जातकाे बिभाजन गरेका हुन ।
जसले बिहान चाँडै उठेर पुजा पाठ गर्छ, भान्सामा बसेर खाना बनाउने देखि खुवाउने सम्म गर्छ, धर्मकर्म गर्छ त्सलाई बाहुन, जसले शाशन गर्छ अलिकति कसैलाई दवाफ गर्न खाेज्छ, म बाद गर्छ, अरुलाई अबसर दिदैन उसैलाई ठकुरी, भनेर बिभाजन गरीदा बाँकि रहे साेझा, ईमान्दार परिश्रमि मेहनति काम गरी खाने, सत्य बाेल्ने, पुजा पाठ नगर्ने, सिप गरेर खानेहरुलाई दलित बनेर राजा जयस्थिति मल्लले बर्गिकरण गरेका हुन । यसरि बर्गिकरण गरीसकेपछि एउटाले अर्काेलाई शाेषण गर्नकालागि राजा मल्लले उनिहरुकाे अस्तित्व समेत बर्गिकरण गरेकाे ईतिहाँस छ । जस्लाई दलित भनेर बर्गिकरण गरियाे उसैले बाहुन लगायतका अाफु भन्दा ठुला भनेका जाति सँग सँगै बसेर नखाने उनिहरुकाे खानेकुरा पानि नछुने र उनिहरुका घरभित्र समेत नछिर्ने र उनिहरुकाे सबै काम गरीदिने काम गरे बापत जे दियाे त्यहि मर्जिले लिएर जाने भनेर राजाले हुकुम गरेदेखि दलितहरु अछुतकाे पिंजडामा परे ।
त्यहि समय देखि राजाकाे हुकुमकाे कारणले नै दलितहरुलाई ठुला जात ताेकिएकाहरुले हेप्न थालेपछि । दलितहरुले पनि अधिकार चाहेर पनि पाएनन । सिप दलितले गर्ने श्रम दलितले गर्ने, तर श्रमकाे मुल्य उनिहरुले ताेक्ने जसले श्रमनै गर्दैनन । बिडम्वना राजाकाे हुकुम अनुसार शाेषकाे तरिका यस्ताे थियाे मन्दिरमा पुजा बाहुनले गर्ने त्यहि मन्दिरमा बाहुनलाई पुजा गर्ने मुर्ति दलितले बनाउने तर मन्दिरमा जान नपाउने पुजा गर्न नपाउने । दलितले त्यहि बाउनकाे घर बनाउने अनि बाहुनले गाईकाे पिसाब अर्था गाैत छरेर घरलाई चाेखाे बनाई सकेपछि त्यहि घर भित्र कुकुर जान्छ बनाउने दलित अाफैले बनाएकाे घरभित्र जान नपाउने । सिपका कालिगड दलितले नै धारा बनाउने त्यहि धाराकाे पानि दलितले छुन नपाउने । जातले ठुला भनिएका बाहुनका खेतमा धान दलितले राेपिदिने, धान माडेर घर सम्म दलितले ल्याईदिने त्यहि चामलले पाकेकाे खाना दलितले छुन नपाउने । उनिहरुका गाई भैँसि दलितले चराउने त्यहि गाई भैसिकाे दुध दहि उनिहरुकाे कुकुरले समेत खाने तर दलितले खाने त सपना हाे छुन समेत नपाउने । दलितले काटेकाे घाँस उनिहरुका भैसिले खाने त्यहि भैसिकाे दहि बाहुनले खाने दलितले नछुने उनिहरुले जे भन्याे त्यहि मान्ने उनिहरुकै हलाे जाेत्ने अाफ्नाे खेति लगाउन नपाउने लगायपनि उनिहरुकाे काम सकिय पछि मात्र । काम गर्न नजादा यातना दिने लगायतका दलितलाई शाेषेर खानका लागि दलितलाई कमारा बनाउनका लागि राजा जयस्थिति मल्लले रचेका जालि हकुमहरु हुन ।
जति बुझ्याे त्यति नै बुझ पचाउन खाेज्ने हाम्राे मानव समाज हाेस या दलितलाई मानवजाति नमान्ने अझै कमारा बनाउनु पर्छ भन्ने चेतनले हाे अझै नेपालका हरेक बस्तिमा हरेक कुनामा हरेक समुदायमा जातिय बिभेदका समस्याहरु अाउने गरेका छन । दलितलाई अभद्र ब्यवहार गर्नेहरु कुरा नबुझेर हाेईन हेपि रहनु प्रर्छ भन्ने बिचार अाफ्नाे दिमाग बाट हटाउन सक्दैन । यसलाई कानुनले मान्यता दिएकाे दिखिदैन । संबिधानमा लेखिए अनुसार मान्यता नदिएकाे हाेएन । हाम्राे देशकाे संबिधान लेख्नेहरुदेखि लिएर कार्यन्वयन गर्नेहरु सम्म दलित नभएर हाे । शाेषक र सामन्तिले दलितका नाममा फाईदा उठाउनका लागि संबिधानमा जातिय बिभेद गर्न मिल्ने छैन भनेर लेखे । दलितका मुद्वा उठान गर्नबेला अाउछ दलितलाई झुटा मुद्वा लगाईन्छ कमजाेर बनाईन्छ । त्यसैकाे नाममा अर्काे केेश बनाईन्छ । बाहिर प्रचार हुन्छ याे अर्कै केष हाे नेपालमा जातिय छुवाछुत छैन ।
उदारणका लागि कालिकाेटका महनबिर सुनारलाई चुलाे छाेयकै निउमा मारियाे कानुनले सुनायाे मदिरा सेवन गरेर मृत्यु भएकाे भनेर,२०७४ सालकाे स्थानिय निर्बाचन पछिकाे कुरा हाे ! कालिकाेटकाे नरहरीनाथ गाउँपालिकालि दलित महिला वडा सदस्य लाई धाराे छाेयकाे निउमा निर्मम कुटपिट गरी मारियाे तर पिडितले न्याय पाएनन । दलितलाई अन्तत करै नगराै देशकाे राजधानिमा समेत घरबेटिले काेठा दिन मान्दैनन । दलितका कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि बिभिन्न बाहानामा हितक्षेप र दमन गर्ने प्रबिर्ति अझैँ याथावत छ । देशमा दलित कलाकारहरुले मिडिया पाउँदैनन । देशमा चल्ने महाेत्सवमा दलित कलाकार सहजै स्विकारीदैनन । दलित कलाकारले राम्राे गित बजारमा ल्याउँदा बिभिन्न गालि गलाैज गरेर फसाउन खाेजिन्छ यसका उदारणका पात्र बनेका छन ।